Archive du 20191122
Tsipy kanetibe - tompondaka eran-tany 2019 Tafakatra 1/8-ndalana avokoa ny solontena Malagasy
Rehefa avy nahazo ny vokatra : Madagascar-Usa (13-3), Madagascar-France (3-13), Madagascar-Cambodge (13-6),
Taranja tsipy kanetibe Tsy tokony hohadinoina, hoy ny FFAM
Ankoatra ny baolina kitra izay nampiray sady nanandratra ny voninahitr’i Madagasikara tamin’ny alalan’ny BAREA dia tsy tokony hohadinoina ny tsipy kanetibe hoy ny fikambanana mpanao asa soa FFAM (Force Féminine d'Aide Mutuelle).
TAEKWONDO ITF MALAGASY Raikitra indray ny ITF Dojang Heng De Coupe
Hanatanteraka hetsika lehibe etsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano rahampitso sabotsy 23 sy amin’ny alahady 24 novambra 2019 izao ny klioba Madagascar ITF Dojang Heng De.
Eny amin’ny kianjan’i Mahamasina amin’izay no hanohizana ny fifaninanana “Foot à 7 Gégé Bosco” filohan’ny Club Uscafoot sy ny mpikarakara miaraka
Maika ny ho lany fotsiny e
Azo nisaina tamin’ny rantsan-tanana ny depiote tonga teny Tsimbazaza handinika mikasika ny tetibolam-panjakana ho ampiasaina amin’io taona ho avy io. Mbola variana manao propagandy, hono, mantsy ny ankamaroany.
Harin-karena talohan’ny 2009 Amin’ny 2024 vao ho tratran-dRajoelina…
Raha fampandrosoana ara-toekarena, dia efa tratrantsika tany alohan’ny fanonganam-panjakana 2009 ny fitomboan’ny harin-karena
Mpandraharaha amin’ny sehatra lamba Tsy ampy tohana ara-bola ny ankamaroany
Misehatra amin’ny tsy ara-dalàna ny maro an’isa amin’ireo mpandraharaha mamokatra lamba (Textile, Habillement et Accessoires na THA) eto Madagasikara.
Foara Vidy Varotra faha-11 Mpitsidika 50 000 no andrasana etsy Mahamasina
Hiverina ny Foara Vidy Varotra ka hatao mandritra ny efatra andro dia 28-29-30 novambra, ary hifanarana ny 1 desambra etsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena sy Kolontsaina Mahamasina ny andiany faha-11.